Mashoko Akanaka Akanyorwa naMako 14:1-72
Vapristi vanorangana kuuraya Jesu (1, 2)
Jesu anodirwa mafuta anonhuhwirira (3-9)
Judhasi anotengesa Jesu (10, 11)
Paseka yekupedzisira (12-21)
Kudya Kwashe Kwemanheru kunotangwa (22-26)
Petro anoudzwa kuti acharamba Jesu (27-31)
Jesu anonyengetera muGetsemane (32-42)
Jesu anosungwa (43-52)
Anotongwa neSanihedrini (53-65)
Petro anoramba Jesu (66-72)
14 Kwakanga kwasara mazuva maviri+ kuti Paseka+ neMutambo Wechingwa Chisina Mbiriso+ zvisvike. Uye vatungamiriri vevapristi nevanyori vakanga vachitsvaga nzira yekumubata* nayo vachishandisa manomano* kuti vamuuraye;+ 2 nekuti vaiti: “Hatidi kuzviita pamutambo; pamwe vanhu vangazoita zhowezhowe.” 3 Paaiva kuBhetani achidya mumba maSimoni wemaperembudzi, mumwe mukadzi akauya nechinu chearabhasta* chaiva nemafuta enadhi chaiyo, anonhuhwirira, anodhura zvikuru. Akavhura chinu chacho akatanga kuadira mumusoro maJesu.+ 4 Vamwe vavo vakatsamwa nazvo vakatanga kutaurirana vachiti: “Ko mafuta aya anonhuhwirira ari kutambisirweiko? 5 Nekuti mafuta aya anonhuhwirira angadai atengeswa nemari inopfuura madhinari* 300 yopiwa varombo!” Vakamugumbukira chaizvo.* 6 Asi Jesu akati: “Siyanai naye. Muri kuda kumunetserei? Andiitira zvakanaka.+ 7 Nekuti varombo munogara muinavo,+ uye munogona kuvaitira zvakanaka chero pamunoda, asi hamusi kuzogara muineni.+ 8 Aita zvaagona; adira muviri wangu mafuta anonhuhwirira achigadzirira kuvigwa kwangu.+ 9 Chokwadi ndinoti kwamuri, kwese kuchaparidzwa mashoko akanaka munyika yese,+ zvaitwa nemukadzi uyu zvichataurwawo achiyeukwa.”+ 10 Judhasi Iskariyoti, mumwe wevane Gumi Nevaviri, akabva aenda kuvatungamiriri vevapristi kunomutengesa kwavari.+ 11 Pavakazvinzwa, vakafara, vakavimbisa kumupa mari yesirivha.+ Saka akatanga kutsvaga mukana wekumutengesa. 12 Pazuva rekutanga reChingwa Chisina Mbiriso,+ pavaiwanzobayira chibayiro chePaseka,+ vadzidzi vake vakati kwaari: “Munoda kuti tinokugadzirirai kupi pekudyira Paseka?”+ 13 Akabva atuma vadzidzi vake vaviri akati kwavari: “Pindai muguta, uye muchasangana nemurume akatakura chirongo chemvura. Muteverei,+ 14 uye chero maanenge apinda, muti kumuridzi wemba, ‘Zvanzi neMudzidzisi: “Imba yevaenzi yandingadyira Paseka nevadzidzi vangu ndeipi?”’ 15 Achabva akuratidzai imba huru yepamusoro, inotova nezvese zvekushandisa. Motigadzirira imomo.” 16 Saka vadzidzi vakabuda, vakapinda muguta, vakawana zvakangoita sezvaakanga avataurira, vakagadzirira Paseka. 17 Ava manheru, akauya aine vane Gumi Nevaviri.+ 18 Pavakanga vakagara patafura vachidya, Jesu akati: “Chokwadi ndinoti kwamuri, mumwe wenyu ari kudya neni achanditengesa.”+ 19 Vakatanga kurwadziwa nazvo uye mumwe nemumwe akati kwaari: “Ndini here?” 20 Iye akati kwavari: “Ndemumwe wevane Gumi Nevaviri, ari kuseva neni mundiro.+ 21 Nekuti Mwanakomana wemunhu ari kuenda, sekunyorwa kwazvakaitwa nezvake, asi ane nhamo munhu iyeye ari kutengesa Mwanakomana wemunhu!+ Zvaiva nani kudai munhu iyeye asina kutombozvarwa.”+ 22 Pavakanga vachidya kudaro, Jesu akatora chingwa, akakumbira chikomborero, ndokuchimedura, uye akavapa, achiti: “Tambirai; chinomirira muviri wangu.”+ 23 Uye akatora kapu, akaonga ndokuvapa, vakanwa vese.+ 24 Akati kwavari: “Iyi inomirira ‘ropa+ rangu resungano,’+ richadururirwa vazhinji.+ 25 Chokwadi ndinokuudzai kuti handichazombonwizve zvibereko zvemuzambiringa kusvikira zuva randichazvinwa zvava zvitsva muUmambo hwaMwari.” 26 Pavakazopedza, vakaimba nziyo dzekurumbidza,* ndokubuda vachienda kuGomo reMiorivhi.+ 27 Uye Jesu akati kwavari: “Mese muchandisiya,* nekuti zvakanyorwa kuti: ‘Ndicharova mufudzi,+ uye makwai achapararira.’+ 28 Asi kana ndamutswa, ndichafanotungamira kuGarireya.”+ 29 Asi Petro akati kwaari: “Kunyange vamwe vese vakakusiyai,* ini handisi kuzodaro.”+ 30 Jesu akabva ati kwaari: “Chokwadi ndinoti kwauri, nhasi, usiku huno chaihwo, jongwe risati rarira kaviri, uchandiramba katatu.”+ 31 Asi akaramba achingoti: “Kunyange kana ndichifanira kufa nemi, handizombokurambii.” Vamwe vese vakatangawo kutaura saizvozvo.+ 32 Saka vakasvika panzvimbo inonzi Getsemane, akati kuvadzidzi vake: “Garai pano ini ndimbononyengetera.”+ 33 Uye akaenda naPetro naJakobho naJohani,+ uye akatanga kushungurudzika zvikuru uye kunetseka zvikuru. 34 Akati kwavari: “Mwoyo* wangu uri kurwadziwa kwazvo,+ zvekufa. Sarai pano murambe makarinda.”+ 35 Uye akaenda mberi zvishoma, akapfugama, ndokutanga kunyengetera kuti kana zvichibvira, nguva yacho imupfuure zvayo. 36 Uye akati: “Abha,* Baba,+ zvinhu zvese zvinobvira kwamuri; bvisai kapu iyi kwandiri. Asi ngakurege kuva kuda kwangu, asi kuda kwenyu.”+ 37 Akadzoka, akavawana vachirara, akati kuna Petro: “Simoni, uri kurara? Washaya simba rekuramba wakarinda kweawa imwe chete here?+ 38 Rambai makarinda uye rambai muchinyengetera, kuti murege kupinda mumuedzo.+ Mweya* unoda zvawo, asi nyama haina simba.”+ 39 Akaendazve akanyengetera, achitaura zvaakanga ambotaura.+ 40 Akadzokazve akavawana vachirara, nekuti maziso avo akanga achirema, saka vakashaya kuti vomupindura vachitii. 41 Uye akadzoka kechitatu akati kwavari: “Nguva yakaita seino ndiyo yamuri kurara muchizorora henyu! Zvakwana! Nguva yacho yasvika!+ Onai! Mwanakomana wemunhu ava kutengeswa mumaoko evatadzi. 42 Simukai tiende. Onai! Mutengesi wangu ava kusvika.”+ 43 Achiri kutaura, Judhasi, mumwe wevane Gumi Nevaviri akabva asvika aine vanhu vakawanda vaiva nemapakatwa netsvimbo, vatumwa nevatungamiriri vevapristi nevanyori nevakuru.+ 44 Mutengesi wake akanga avapa chiratidzo, achiti: “Mukaona wandinenge ndatsvoda, ndiye wacho; ibvai mamusunga, muende naye makanyatsomuchengetedza.” 45 Akabva ananga kwaari, akasvika achiti, “Rabhi!” ndokubva amutsvoda zvinyoronyoro. 46 Saka vakamubata, vakamusunga. 47 Asi mumwe wevaya vakanga vakamira ipapo akavhomora bakatwa rake, akacheka muranda wemupristi mukuru, nzeve ikabva.+ 48 Asi Jesu akati kwavari: “Ko ndava gororo here zvamauya kuzondisunga muine mapakatwa netsvimbo?+ 49 Ndaiva nemi mutemberi mazuva ese,+ asi hamuna kundisunga. Zvisinei, izvi zviri kuitika kuti Magwaro azadziswe.”+ 50 Uye vese vakamusiya, vakatiza.+ 51 Asi rimwe jaya rakanga rakafuga jira rakanaka risina charakapfeka, rakatanga kumutevera riri pedyo, uye vakaedza kuribata, 52 rikasiya jira racho, ndokutiza risina kupfeka.* 53 Vakazoenda naJesu kumupristi mukuru,+ uye vatungamiriri vevapristi vese nevakuru nevanyori vakaungana.+ 54 Asi Petro akamutevera ari nechekure, kusvikira muchivanze chemupristi mukuru; uye akagara pamwe chete nevashandi vepamba pacho achidziya moto waibvira chaizvo.+ 55 Vatungamiriri vevapristi neSanihedrini yese vakanga vachitsvaga uchapupu hwekuti vawanire Jesu mhosva kuti vamuuraye, asi vaihushaya.+ 56 Vakawanda vaimupomera zvenhema,+ asi uchapupu hwavo hwakanga husingabvumirani. 57 Vamwewo vaisimuka, vachimupupurira zvenhema, vachiti: 58 “Takamunzwa achiti, ‘Ndichapaza temberi iyi yakavakwa nemaoko, uye ndichavaka imwe mumazuva matatu isingavakwi nemaoko.’”+ 59 Asi kunyange panyaya iyoyi, uchapupu hwavo hwakanga husingabvumirani. 60 Mupristi mukuru akabva asimuka pakati pavo, akabvunza Jesu kuti: “Haupinduri here? Unoti chii nezvauri kupomerwa nevarume ava?”+ 61 Asi akaramba akanyarara uye haana kumbopindura.+ Mupristi mukuru akatangazve kumubvunza, akati kwaari: “Ndiwe Kristu Mwanakomana weAnokudzwa here?” 62 Jesu akabva ati: “Ndini; uye muchaona Mwanakomana wemunhu+ agere kuruoko rwerudyi+ rwesimba achiuya nemakore ekudenga.”+ 63 Mupristi mukuru akabva abvarura nguo dzake, akati: “Tichadirei zvimwe zvapupu?+ 64 Manzwa kumhura kwacho. Munoti kudii?” Vese vakati aifanira kufa.+ 65 Vamwe vakatanga kumusvipira mate+ uye kumufukidza kumeso vomurova nezvibhakera vachiti kwaari: “Profita!” Uye vashandi vepadare vakamurova kumeso nembama ndokuenda naye.+ 66 Petro paakanga ari pasi muchivanze, mumwe musikana aishandira mupristi mukuru akauya.+ 67 Paakaona Petro achidziya moto, akanyatsomutarisa, akati: “Iwe waivawo naJesu uyu wekuNazareta.” 68 Asi iye akaramba, achiti: “Handimuzivi uye handisi kunzwisisa zvauri kutaura,” akabva abuda panze akaenda kuchivanze panopindwa napo. 69 Ava ikoko mushandi wacho wechisikana akamuona, akatangazve kuti kune vaya vakanga vakamira pedyo: “Uyu mumwe wavo.” 70 Iye akarambazve. Uye pashure pekanguva, vamwe vakanga vakamira pedyo vakatangawo kuti kuna Petro: “Chokwadi uri mumwe wavo iwe, nekuti uri muGarireya iwewe.” 71 Asi akatanga kutuka achipika, achiti: “Handimuzivi ini murume wamuri kutaura nezvake uyu!” 72 Jongwe rakabva rarira kechipiri pakarepo,+ uye Petro akayeuka zvaakanga audzwa naJesu kuti: “Jongwe risati rarira kaviri, uchandiramba katatu.”+ Uye akakurirwa neshungu, akatanga kuchema.
^ Kana kuti “yekumusunga.”
^ Kureva kuti vaida kumusunga nenzira inoita kuti vanhu vaone seane mhosva.
^ Kana kuti “Vakamupopotera; Vakamutuka.”
^ Kana kuti “mapisarema.”
^ ChiGir., “muchagumburwa.”
^ ChiGir., “vakagumburwa.”
^ Kana kuti “kunyatsopfeka; richingova nenguo yemukati chete.”